Home / भिडिओ / पोखराका मान्छे निल्ने नाली: मोटरसाइकलसहित खसेका १८ वर्षीय पिजन पुनको छैन अत्तोपत्तो !
पोखराका मान्छे निल्ने नाली: मोटरसाइकलसहित खसेका १८ वर्षीय पिजन पुनको छैन अत्तोपत्तो ! 0
पोखरा । पानी निकासको लागि सडक छेउमा बनाइएका नाली नै नागरिकको काल सावित भएका छन् । डेढ वर्षयता नालीमै परेर पोखरामा ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सडक छेउमा रहेको ढल र नालीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा मोटरसाइकल चालक र पैदल यात्रु असुरक्षित रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
कात्तिक ४ गते भाइटीकाको दिन लामाचौरमा नालीमा परी १ युवा वेपत्ता भए । ग१३प ३११० नम्बरको बाइक अनियन्त्रित भएर नालीमा पर्दा बाइक चालक पिजन पुन बेपत्ता भएका हुन् । पोखरा–१९ का पुन अझै फेला परेका छैनन् । उनले चलाएको मोटरसाइकलपछाडि बसेका श्रवण पुर्जा भने घाइते भएका छन् । थप भिडियोमा
प्रहरीको संरक्षणमा लाखौको जुवा (हेर्नुहोस सिधाकुरा जनतासंग)